जथाभावी महिलाहरु गर्भवती बनाउने भगवान ? अब इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्दैमा रविको कर्तुत लुक्दैन – नेपाली सूर्य
March 17, 2019 Nepali SuryaLeaveaComment on जथाभावी महिलाहरु गर्भवती बनाउने भगवान ? अब इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्दैमा रविको कर्तुत लुक्दैन
सम्झना पौडेल। म एक स्वतन्त्र पत्रकार हुँ । आजसम्म दलकारिता, प्रचारकारितासँग रहेर कहिल्यै कुनै प्रकारका कसैको पनि दवावमा परेर न रेडियोमा हुँदा समाचार भने, न अनलाइनहरुमा लेख लेखेँ ।
लोकतन्त्रमा फरक विचार राख्न पाउनु सबैको अधिकार हुन्छ । तर भगवान मानिएका अमुकपात्रको बिषयमा केहि लेख्दा धेरैले सर्पले झै डस्न खोज्ने यसअघि पनि गैरकानुनिरुपमा बस्दै आएको र अमेरीकि कार्ड नत्यागेको बिषयमा लेख्दा म डिप्रेसनमा नै पुगेको थिए।
कसैले पनि आफ्नो धरातल बिर्सनु हुँदैन । धरातल के हो त्यसमै अडिक रहेको राम्रो हुन्छ । कुतर्क गर्न आवश्यक छैन । कहिले घरमा एक बुढि हुँदाहुँदै अरुसँग सम्पर्क गर्ने र बच्चा जन्माउने, कहिले डिभोर्स गरेर अर्कीसँग इन्गेजमेन्ट गर्ने यस्तालाई के भन्ने खै ? लौ आफै भन्नुहोस्।
इशाले डिभोर्स गर्नुको कुनै जरुरतनै थिएन । थियो त केवल उनै अमुक पात्रलाई अर्कीसँग बिहे गर्नु र बाध्य बनाएको हुनुपर्छ भनेर सहजै भन्न सकिन्छ । हो यसरी एक महिला पीडामा पर्दा मौका छोपेर त्यो पुरुषसँग लाग्ने र एक महिलालाई समस्या पर्दा उल्टो हेप्ने प्रवृत्तिले आलो घाउमा नुनचुक छर्ने काम गरेको छ । भन्ने बेलामा भगवान भन्ने नै हुदैन यो त सब मान्छेले बनाएको कुरा हो भनेर ठुल्ठुला स्वरमा कराउने अनि ईमोसनल ब्ल्याकमेल गर्दै
अमुक पात्रलाई चाहि भगवान नै मानेर सबै गल्ती इशाकै देख्ने हो भने हामी र हाम्रो समाजमा अझै पनि महिला प्रति हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक छ भनेर सहजै भन्न सकिन्छ । (लेखकको निजि विचार) साभार : एभरेष्ट दैनिक
विप्लव समूहलाई सरकारले चिन्दैन : प्रधानमन्त्री ओली
कटेजमा आगलागी हुँदा खड्गको जलेर ज्यान गयो , नचिनिने अवस्थामा शव फेला
जब बैंकमा ४८ हजार जम्मा गरेका चिया पसलेको बैंक खातामा गल्तिले कर्मचारीले ४ करोड बनाईदिएपछि..
March 31, 2019 March 31, 2019 Nepali Surya
फोटो खिच्न गएका एक युवक को तिनाउ नदीमा डुबेर मृत्यु
April 13, 2019 Nepali Surya